China Custom 28/400 28/410 28/415 Plastic PP Material Head Trigger Triger Sprayer For Bottle Manufacture and Factory | Yongxiang
Izitshizi zethu ze-Trigger zineendlela ezili-9 ezihlukeneyo zoyilo lwesitshizi ukuze ukhethe.Kukho ubungakanani bokuvala obu-3 obunokukhethwa: 28/400,28/410 kunye ne-28/415. Iinketho zombhobho zinezitshizi, umjelo kunye nokucima. Intamo ihambelana kakuhle nebhotile, enokuthintela ukuvuza. Umsebenzi we-trigger kukutshiza ngesiphumo esihle se-atomization. Lonke olu hlobo lwe-trigger sprayer lunokuba ne-nozzle eyongezelelweyo yogwebu.
intloko nge grating stainless. Malunga nombala weemveliso, kuxhomekeke kuwe!
I-Trigger sprayer isetyenziselwa ukucoca iimveliso kunye nezityalo zokunkcenkceshela. I-Trigger sprayer nge-nozzle yogwebu inokuvelisa igwebu elityebileyo nelithambileyo, elidla ngokusetyenziselwa izicoci zefestile, izicoci zasekhitshini, kunye nolunye ulwelo.
Ubungakanani: 28/400, 28/410, 28/415
Izinto eziphathekayo: iPP, iPE, iPOM, i-304Stainless Steel, IBHOLA yeglasi
I-QTY ye-20 ″ isikhongozeli: 190,000-220,000PCS
I-QTY ye-40 ″ isikhongozeli: 460,000-500,000PCS
Vula / Vala uMlomo
Le Trigger Sprayer iza nesiketi esinembambo ukuze sijije ngokulula ngezandla ezimtyibilizi kunye nokufikelela ngokulula kumxholo ongaphakathi ebhotileni. Ukongeza, esi sitshizi sesitshizi seplastiki esinembambo sifaka i-On/Off nozzle kwincam yesitshizi. Uyakwazi ukujija umlomo wokuVula/uValwe ngasekunene okanye ngasekunene ukuvala indlela yokuphuma kwisitshizi. Xa ukwindawo evaliweyo, ithintela isitshizi ekuphumeni ngempazamo kwaye igcina isixhobo sokucupha sikwimo engqongqo.
Imveliso kunye neDip Tube
Esi sitshizi seplastiki esinembambo sitshizi sinamandla okutshiza amalunga ne-0.8-1.2cc ngesitshizi ngasinye. Nje ukuba umlomo wombhobho usete kwindawo yokuma, esi sitshizi sikhupha isitshizi senkungu esilungileyo esigquma ingubo enkulu yomphezulu. Okokugqibela, Ubude beDip Tube: bunokwenziwa ngokwezifiso
Ekugqibeleni, yenziwe kwi-(PP) yeplastiki ye-polypropylene ephawulwe ngekhowudi yokuchongwa kwe-resin ye-5. I-Polypropylene ayiguquguqukiyo ngaphantsi kwe-LDPE, iqinile kunezinye iiplastiki. Ukongeza, izitshizi zethu zePlastiki eziRibbed Skirt Trigger zinokuza ngohlobo oluguquguqukayo, opaque, lwendalo, olumhlophe, okanye nawuphi na umbala. I-PP inokumelana okuhle kakhulu nokudinwa kwaye inendawo yokunyibilika ephezulu kakhulu (320 degrees Fahrenheit okanye 160 degrees celcius).
Ukuqukumbela, ungabhanqa le Sprayer kunye neeBottles ezahlukeneyo ezihambelana nobukhulu bentamo ye-28-410. Umzekelo, inani lokuqala limele ubukhulu bezikhongozeli ezivulekayo nakwi-(mm). Inombolo yesibini imele intambo-ubunzulu be-skirt yokuvala. Ngamanye amazwi, esi sitshizi silungile kulo naluphi na ulwelo ukusuka kwizinto zokuthambisa ukuya kwiimveliso zokhathalelo lomntu. Xa umpompo ucinezelekile, imveliso ikhutshwa kwinkungu entle. Umzekelo, isitshizi sinemveliso ye-0.8-1.2cc ngoshicilelo oluqinileyo.
Zonke iziqhumiso zethu ezidityaniswe ngoomatshini ngokuzenzekelayo, hayi ngezandla zabantu, kwaye sinomatshini wokukhangela ivacuum yesitshizi, ngoko ke Yenzelwe ukuba ingavuzi ukuba iingcebiso zebhotile ziphelile.
Ihlala ixesha elide
Iimveliso zethu zisebenzisa imathiriyeli yeplastiki eluhlaza kunye nemithombo yomgangatho olungileyo, umzimba wangaphandle ukhusela indibano yepiston kumonakalo ngexesha lokusetyenziswa kunye nokugcinwa.
Ukucocwa kweGumbi langasese, ukugcinwa kwendlu, ukucocwa kweefestile, ukuvaswa kweemoto, iinkcukacha ezizenzekelayo, uLawulo lweZitshabalalisi, ukuKhathalelwa kweLawn, ukuSetyenziswa Jikelele.
Qalisa izitshizi kwiZitayile ezahlukeneyo kunye neZiphumo zeMulitple yokuPakisha kwiShishini
Izitshizi ze-Trigger luphawu olubalulekileyo lokupakisha kwizinto ezininzi ezenziweyo, njengabacoci bendlu kunye nezinto zokhathalelo lomntu. Njengomboneleli okhokelayo wezisombululo zokupakisha kwimizi-mveliso kwibhodi iphela, i-YONGXIANG igcina ikhathalogu yezitshizi ze-trigger ezihambisa iimfuno zakho zokwenza izicoci zefestile, izicoci zasekhitshini, kunye nolunye ulwelo.
Xa ungenakugqiba ukuba sesiphi isitshizi esilungele umgca wemveliso yakho okanye izikhongozeli ezikhoyo, iingcali zokupakisha zikaYONGXIANG zibonelela ngoncedo lobuqu. Ungaqhakamshelana nelungu leqela le-YONGXIANG ukuze ufunde malunga nokulinganisa iindibano zesitshizi sokutshiza kunye nokuxoxa ngokhetho lwakho lokuthenga iiodolo zesitshizi sehoseyile kunye nesitshizi esikhulu.
Thatha umzuzu ukukhangela ukhetho olukumgangatho ophezulu kwizitshizi zetrigger ngoku ezifumanekayo kwi-YONGXIANG kwi-inventri ekhoyo. Beka imibuzo yakho ephezulu kwi-intanethi ngoku okanye ufowunele iqela le-YONGXIANG ukuze lixoxe ngeenkqubo zakho zokuvelisa kunye nemihla yokugqibela yokuthumela.
Ngaphambili: Umenzi weThengiso ngokuthe ngqo kwi-Trigger Sprayer 28/400 28/410 Isigqoko sokutshiza esiSiko seDaily Custom Authorized Tube isitshizi seplastiki
Okulandelayo: Iibhotile zePlastiki eFrosted eGqizwayo, eZizaliswayo, Iibhotile zePerfume zitshiza ukuHamba kunye nesipho, iPeni ephathwayo encinci
Qalisa Isitshizi 28/400
Qalisa Isitshizi 28/410
Qalisa Isitshizi 28/415
Qalisa ibhotile yesitshizi
Intloko ye-Sprayer ye-Trigger
Qalisa impompo yesitshizi
Impompo yemveliso yeplastiki yonikezelo oluthe ngqo yeplanti yena...
28mm I-Trigger Sprayer 28/400 28/410 Isitshizi eseSiko...
Isitshizi soMlomo esiThengisa ngeXabiso leNtengiso iOra...
Isixhobo sokukhupha amagwebu enziwe ngePlastiki emhlophe 40MM ...
Umenzi weThengiso ngokuthe ngqo Isitshizi seSitshizi sama-28/400...